Aung.Info | ၈၈ တုန်းက အမှတ်တယ စာများရေးရန် စိတ်ကူးမိပါတယ်...
၈၈ ခုနှစ်တုန်းက ကျနော် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်ပါ၊ ဒါပေမဲ့ တရားဝင် ကျောင်းသားတော့ မဟုတ်ပါဖူး။ (ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတာကို နောက်ကြမှ ရှင်းပြပါ့မယ်)
ကျနော်နဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ – ဒုဝန်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့သား၊ စစ်တပ် ဆေးတက္ကသိုလ်က ပေါမောက္ခ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့သား၊ ရဲမှူးကြီး တစ်ယောက်ရဲ့သား နဲ့ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့သား တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၈၈ အရေးအခင်း စဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ အားလုံး အင်တိုက်အားတိုက် ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ အရေးအခင်းပြီးတဲ့ အခါ အဲဒီ အရာရှိကြီးများမှာ ပေါမ္မောခ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်မှလွဲ၍ အကုန် ပြုတ်ကုန်ကျပါတယ်။
အဲ…. ကျနော့် အဖေလဲ အပါအဝင်ပေါ့ – ကျနော့် အဖေက ဦးနေဝင်းရဲ့ ပါတီဌာနချုပ်ကပါ…။
This post has 954 views	with 78 comments	.
Lin Zaw Aung facebook user says:
24/Nov/2016 at 7:36 am
Yair Yint Lwin facebook user says:
24/Nov/2016 at 6:03 am
ပါ​မောက္ခ ဆိုတာလေးတော့ မှန်အောင်ပေါင်းပါဗျာ
Koko Aye facebook user says:
24/Nov/2016 at 5:49 am
Myat Min Oo facebook user says:
24/Nov/2016 at 5:11 am
likeပေးပြီးပြီ ကိုယ့်ညီက တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးပေတော့